အင်ထရိုဒတ်ရှင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အင်ထရိုဒတ်ရှင်း
Posted by mashwetote on Dec 24, 2011 in My Dear Diary | 41 comments
ရွာထိပ်ရှိ မာလကာပင်အောက်ကနေ ရွာသားအားလုံးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ။
ဒီရွာထဲက ပို့စ်တွေကို ၀င်ဝင်ဖတ်နေတာကြာပါပြီ။ ရွှေတုတ်အချစ်ဆုံးဒေါ်လေး (ဒူလဲတော့ ပြောတော့ပါဘူး။ ခုနက၀င်တော့မှတွေ့လိုက်တယ်။ တော့ပ်ပိုစတာ ဆိုတဲ့အထဲမှာ တူ့နာမည်ကြီး။) အင်ထရိုလုပ်တာနဲ့ ၀င်ဖတ်ကြည့်တာပါ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ တတ်သည့်ပညာ မနေသာဆိုသလို ကီးဘုတ်ယားလာတာနဲ့ အခုပဲ register လုပ်ပြီးဝင်လာတာပါ။ အခုမှဝင်လို့ rank က newbie ပဲရှိသေးတာနဲ့ အထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ချစ်ဒေါ်လေးကျေးဇူးနဲ့ ဂေဇက်ရွာနဲ့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ရင်းနှီးနေပါပြီ။ ရွာကဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေအကြောင်း နည်းနည်းတော့ တီးခေါက်မိတယ်လေ။ ရွာသူရွာသားတွေနဲ့လည်း ပိုရင်းနှီးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်လို့။
၀င်သာဝင်ရတာ လန့်တော့ခပ်လန့်လန့်ပါပဲ။ ရွာသားတွေ လက်သံပြောင်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတယ်လေ။ အဲဒီတော့ အခုကတည်းက ကြိုပြောထားပါရစေ မှားတာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့။ ထပ်ပြီးကြိုပြောရဦးမယ်။ ရွှေတုတ်က အခုစလုံးမှာ ကျောင်းတက်နေတာကြောင့် အိမ်မှာမြန်မာလိုပြောနေပေမယ့်လည်း မြန်မာစာမရေးတာကြာပြီမို့ စာရေးတာ အပေါက်အလမ်းမတည့်တာတို့၊ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့လွဲပြီး အင်္ဂလိပ်စာကနေ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ထားသလိုဖြစ်နေတာတို့ ရှိရင် အမှားကိုထောက်ပြပေးကြပါလို့။
ပထမဆုံးရေးတဲ့ပို့စ်ဆိုတော့ ဘာကိုဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိ။ ရေးစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတောင် ရှည်လျားပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးတတ်တဲ့ မှော်ဆရာကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ သူနှင်တံပျောက်တဲ့ အကြောင်းရေးထားတာလေး ဖတ်ဖူးတယ်လေ။ သဂျီးတောင် နှင်တံကို ဟိုလိုလေးခေါ်ပါလား၊ ဒီလိုလေးခေါ်ပါလားပြောထားတာ တွေ့လိုက်သေးတယ်။
ရွှေတုတ်ရဲ့ ပထမဆုံးပို့စ်ကိုတော့ ဒီမျှနဲ့ပဲရပ်ပါတော့မယ်။ ရွှေတုတ်အကြောင်း သိချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်း ကော်မန့်မှာ မေးကြပါလို့။ (ပြောသာပြောရတယ် ဘယ်သူမှမသိချင်လို့ မမေးရင် ရှက်စရာကြီး။)
မဟုတ်မှလွဲရော .. မဟုတ်ရင်တော့ လွဲမှာပေါ့နော် …
နွေးသီး တူမလေးများလား …
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုဆိုပါတယ် .. ၀ဲလ်ကမ်း ..
ရွှေတုတ်သိသလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ချစ်ဒေါ်လေးက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိမ့်မယ်။
မဝေအကြောင်းလဲ ပြောပါတယ်။ မဝေရဲ့ ဘော်ဒါတွေထဲကပါပဲ။
ကျုပ်ရွာထဲ တိတ်တဆိတ်ဝင်လာတုန်းကနဲ့ တခြားစီ။
ဦးပါက တိတ်တဆိတ်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ ရွာထဲကို ဘာလုပ်ဖို့ဝင်လာမှန်းမှ မသိပဲ။
မေးနိုင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူ အကြောင်းကို။ သိသမျှ၊ တတ်သမျှ၊ မှတ်သမျှ ဖြေပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
တုတ်တွေ ခဲတွေ ဇလုံတွေ ပန်းကန်တွေ ပျံနေတာ – စတားဝါးအတိုင်းပဲ..။
ကြိုဆိုပါတယ် မရွှေတုတ်ရယ်……ရေးပါ စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်..:)
ဘေးမှာရေးထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ညီရင် ရပြီ…
လက်သံပြောင်တာတို့ တိုက်ခိုက်တာတို့ မရှိပါဘူး အသက်အရွယ် ရောက်ရှိတဲ့နေရာဒေသ ပေါ်မူတည်ပြီး အမြင်မတူတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်.. တူတာတွေဖယ်ပြီး မတူတာတွေ ညှိရအောင်လား နော်.. နော်လို့..:P
ပို့စ်တွေ မကြာမည် လာမည် မျှော်…
စောင့်ဖတ်နေတဲ့သူ ရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့ ရေးရတယ်သူအားတက်ပါတယ် တညင်သားရေ။
ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူဆိုသော အသင်သူသား
နာမည်က negative ဆန်လှချည်လား။
မကြာခင် လင်္ကာလေးချိုးပြီး About me မှာတင်မှာမို့ မကြာမီ လာမည်မျှော်ပေါ့ကွယ်နော်။
၂၀၁၁ ကုန်ခါနီးမှာမှ ၀င်လာပေမဲ့လည်း.. မှတ်တမ်းတင်ရင်..ပြောကြရင်… ၂၀၁၁ထဲကကွလို့ပြောလို့ရသပေါ့..။
အဲ..နောက် ၂ပါတ်လောက်နောက်ကျတော့.. ၂၀၁၂ မှာဝင်တာပါဖြစ်ရော..။
တခါတလေ.. နှစ်တွေကို..လူတွေသတ်မှတ်..ဆုံးဖြတ်ကြတာလေး.. တွေးမိလို့ပါ..။
ဒီဟာကို.. မာကက်တင်န်းသမားတွေတော့ အင်မတန်သုံးကြတယ်..။
ကားထုတ်ရာမှာ.. မိုဒယ်ကို ၂၀၁၁နဲ့..၂၀၁၂ သတ်မှတ်လိုက်ရင်ကို.. ဈေးရော…ရောင်းအားရော.. အလွန်ကွာသွားသပေါ့..။
ကြိုဆိုပါကြောင်းနဲ့.. စင်္ကာပူက.. မြန်မာပြည်ရဲ့သမီးတော်အရွယ်တွေ.. စူစိုက်ဒိုင်ဗင်တွေလုပ်တာ.. များနေတာမို့.. သိသလောက်တတ်သလောက်လေး… ရှင်းတမ်းလေးတွေများများတင်စေချင်ကြောင်း..။
၂၀၁၁ မှာဝင်ရတာက နောက်အပတ်ဆိုရင် “ကျွန်မက မနှစ်ကတည်းက စာရေးလာတာ” လို့ ပြောလို့ရအောင်လေ။ သမ္ဘာရင့်တယ်ထင်ရအောင်ပေါ့။
ကုမ္ပဏီတွေက since 1964 တို့ဘာတို့ရေးကြတယ်ဆိုတော့ ပြောရရင်စာရေးအတွေ့အကြုံ တစ်နှစ်ပိုရှိသလိုလို ဖြန်းလို့ရတာပေါ့။
စူစိုက်ဒိုင်ဗင်အကြောင်းကော စူမစိုက်ဒိုင်ဗင်ကြောင်းပါ သိတာဆိုရင်တင်မှာမို့ စိတ်သာချပါ သဂျီးမင်းရှင့်။
အဟမ်း ….. မားကတ်တင်းသမားဒွေ အထင်လွဲခံရဒါဘာကွယ်…
သူရို့လေးတွေဟာ decision makers ကြီးဒွေကို မလွန်ဆန်နိုင်ရှာတဲ့ ….သနားစရာလေးဒွေဘာ….
သဂျီးရယ် …မီဟုတ်တာတွေ မီကျောရ၀ူးနော်…. ..
ှုဤသည်ကား …မားကတ်တင်းအကြောင်း ရေးသည့် နောက်ဆုံးကွန်းမန့်ပင်ဖြစ်သည် ..ထင်၏
အော်. ..စကားမစပ် ၀ဲလ်ခမ်းပါ …မလက်ဖက်သုတ် ရေ …အဲ့လေ မရွှေတုတ်ရေ….
ဒွတ်ခပဲ။ ဒီနာမည်လေးပဲ လာခလုတ်တိုက်နေကြတယ်။
နင် အတံပျောက်တာ..စင်္ကာပူကတောင် သိနေပြီဟ
အော် တယ်လဲ မှတ်မှတ်သားသားရှိတဲ့ မရွှေတုတ် ကိုး..
ပထမဆုံးရေးတဲ့ပိုစ်မှာ ကျွန်တော့အကြောင်း အရေးခံရလို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ ..
ကျွန်တော်လဲ အခုတော့ ဆေးကြိမ်လုံး ပြန်တွေ့သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် တတ်နှိုင်သမျှ ရေးသားနေပါကြောင်း ….
ပျောက်ပြန်ရင်လဲ ဘာကြောင့် ပျောက်ရသလဲဆိုတာ ရေးသားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း
ထိုဆေးကြိမ်လုံးဖြစ် သူများနှာခေါင်းကိုတော့ သွားမရိုက်တတ်ပါကြောင်း
သို့သော် တခါတရံ ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ ဟိုထိုး ဒီထိုးတော့ လုပ်တတ်ပါကြောင်း
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုစာများေ၇းသားးနှိုင်ရန် အလို့ငှာ တိုက်ကွမ်ဒို ကာရာတေး လက်ဝှေ့ စသည့် ပညာရပ်များ ကို စွမ်းစွမ်းတမံ လေ့လာနေပါကြောင်း မိတ်ဆက်သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား ။။။
ကြိမ်လုံးနဲ့ဟိုထိုး. ဒီထိုး..လုပ်တာ ပြဿနာမရှိဘူး.
နင်စီတဲ့ လိုင်းကားဆို ရှောင်မှ..
မှော်ဆရာရဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ဖို့စောင့်နေလျှက်ပါလို့
သူများနှာခေါင်းကို လိုက်မရိုက်တတ်ကြောင်းသိရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါကြောင်း
ဦးပေါက် သူများကိုပဲလိုက်ပြောမနေပါနဲ့။ ရဲက ငှက်ပျောသီးခါးကြားထိုးတာကို ရွာထဲလိုက်ဖွတာ ဦးပေါက်မဟုတ်လား?
အော် တိဘူးလေ။ ဒီလိုပဲ နာမည်တွေကများတော့ ရောတတ်တာပေါ့လို့။ အဟက် အဟက်
ဦးကြောင်ကြီး ရန် ရှောင်ကာထား
ရှောင်မယ် ရှောင်မယ်။ ပထမဆုံးမန့်တာနဲ့တင် ကြောက်လို့ သူ့ကိုပြန်မပြောတော့ဘူး။ ဟီးဟီး။
ကဲ ကဲ ရွှေတုတ်လေး မရှက်ရအောင် ရွာသားတို့ရေ. သိချင်တာလေးတွေ…တွေ.. :grin:
ပြောသာပြောရတယ် .. မမေးအောင်လို့ နံမည်ကို က ရွှေတုတ်လို့ပေးထားတာ နေမှာ……. :grin:
mashwetoke ကတော့ ရွာကိုစ၀င်လာကတည်းက ရွာအကြောင်းကို ကြိုတင်လေ့လာထားတာကိုး။ ကောင်းပါတယ်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်သိုင်းကွက်တွေ ကြိုရှာထားတာပေါ့။ ဒီမှာတော့ ဒီမိုကရေစီ အပြည့်ရှိပါတယ်။
ဦးနေးချား ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်သိုင်းကျမ်းလေးများရှိရင် ရှဲပါဦး။ ရွှေတုတ် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်သိုင်းကျမ်း ပြုစုမယ်ဆိုရင်တော့ ဦးကြောင်ကြီးကထိပ်ဆုံးကပါမယ်။
(မာလကာပင်ပါ … မွှားလို့ မင်္ဂလာပါ)
အလို ကိုကင်းက ကိတ်မုန့်ကျွေးမလို့ဆိုပါလား။ အဲဒီလို ဖော်ဖော်ရွေရွေ ကြိုဆိုတာကို ၀မ်းသာပါတယ်။ သာဓု သာဓု…
21 ရာစုမှာ ရွာထိပ်က မာလကာပင် ဖြစ်သွားပြီလား မရွှေတုတ်ရေ။
အတွေးသွက်သွက် အရေးသွက်သွက်နဲ့ ကလေးဂေဇက် မရွှေတုတ်ကလေးရေ- မျိုးဆက်သစ်တို့ရဲ့ ခွန်အားကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ အားပေးကြိုဆိုနေပါတယ်လို့….
” mashwetote has beenamember of Mandalaygazette since 2011!”
ကဲ ရွာစားရေ အနားတိုးပါဗျုို့..။
ဟက်ပီးနယူ ရီးစား အဲ ယောင်လို့ ဟက်ပီးနယူးရီယား…..။
မဟုတ်ရင်တော့ အဟုတ်တွယ် လက်သံပြောင်ပေမဲ့..
ဂဇက်တက်ပုလိပ် (ဘယ်သူမှမပေးပဲ ကိုယ့်ရာထူးကိုယူထားတာ )
အကျွနုပ်လည်း ကိစ္စ များမြောင် လူတို့ ဘောင်မှာ ကိစ္စလေးတွေရှိလို့ ပြန်ပြီ ဗျို့ နောက်မှ…………. ရွားသားအားလုံးလည်းနောက်မှ ပြောစရရှိတာပြောတော့မယ်
မာကလာပင်အောက်က နှုတ်ဆက်တာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး မာကလာသီးလေး ဘာလေး လက်ဆောင်ပေးမှ ဖြစ်မှာပေါ့..
မင်္ဂလာပါ.. မဟုတ်မှ လွဲရော.. တနေ့က ကားပေါ်မှာ ကြားလိုက်တယ်.. မှော်ဆြာလည်း သိတယ်တဲ့ ဘာတဲ့ ညာတဲ့ အဲဒီ အမျိုးထဲက တူမပဲ ဖြစ်ရမယ် ဟုတ်တယ်မလား..
မှော်ဆြာ့လည်း သိတယ်။ မဆူးကိုလည်းသိတယ်။ ကားပေါ်မှာကြားတယ်ဆိုတာကတော့ ဘာမှန်းမသိ။ သူလည်း မဟုတ်တော့လွဲပြီထင်တယ်။
အဲ … ဒေါ်လေးက မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုလို့ …. အဒူလေးပါလိမ့် … ။
စဉ်းစားရင်း …အတွေးများနေရတာမို့ … ရွှေတုပ်လ္ဘက်သုတ်နဲ့ …. ရေနွေးကြမ်းလေး သောက်ချင်ိုက်တာ .. ။ :D:D
အဟမ်း.. မိရွှေတုတ်… ရေးသားရေး.. မှားမှားမှန်မှန်
လမ်းပြပေးမယ့်… ရွာသူတွေ အချစ်ပိုနေတဲ့
ကိုကြီးတို့လို ချစ်ကိုကြီးတွေ ရွာထဲမှာရှိတယ်…
စိတ်မပူနဲ့…. ကိုကြီးတို့ မှားတာရှိရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပေါ့..
တစ်ဦးက စေတနာ တစ်ဦးက မေတ္တာပေါ့လေ…
မာလကာပင်အောက်မှာ ခြင်းတောင်းနဲ့ ထိုင်စောင့်နေတဲ့
ကိုရင်စည် (နှူးဘားဂိုဏ်း၏ အထွေထွေပြန်ကြားရေးမူးးး)
ကိုရင့်ဗေဒင်နဲ့ တွက်ကြည့်တာ ၅ကြွင်းနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်
မရွှေတုတ် အခုမှ ဖတ်မိတယ်
ရဲကြားက ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးပြတာက ဦးဖက်တီး